द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जुल 29, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
अनुपस्थित सन्देशहरू महत्त्वपूर्ण काम लेखन हुन्। तर धेरै कारणहरूको लागि, तिनीहरू बेवास्ता गर्न सकिन्छ। यो तिनीहरूको लेखनको सन्दर्भ र कहिलेकाहीँ तिनीहरूले पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा नदिई व्याख्या गरिएको छ।
वास्तव मा, अनुपस्थिति सन्देश एक स्वचालित सन्देश हो। एक समय अन्तराल भित्र वा एक परिभाषित अवधि भित्र प्राप्त कुनै पनि सन्देश को प्रतिक्रिया को रूप मा पठाइयो। कहिलेकाहीँ सन्देश बिदामा जाने सन्दर्भमा तयार छ। यो अवधि, जब तपाइँ शायद पहिले नै कहीं तपाइँको दिमाग छ, तपाइँको सन्देश लेख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो समय नहुन सक्छ।
एक स्वचालित अनुपस्थिति सन्देश कन्फिगर गर्ने बिन्दु के हो?
कार्य सन्देश बाट अनुपस्थिति धेरै तरिका मा महत्वपूर्ण छ। यो तपाइँको अनुपस्थिति को तपाइँको सबै कर्मचारीहरुलाई सूचित गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो पनी जानकारी प्रदान गर्न को लागी कार्य गर्दछ कि उनीहरु लाई उनीहरुका गतिविधिहरु जारी राख्न को लागी तपाइँ फिर्ता को लागी पर्खिरहेका बेला अनुमति दिन्छ। यो जानकारी मुख्य रूप मा तपाइँको रिकभरी को मिति हो, आपतकालीन सम्पर्क विवरण तपाइँलाई सम्पर्क गर्न को लागी वा एक आपतकाल मा सम्पर्क गर्न को लागी एक सहकर्मी को सम्पर्क विवरण। यो सबै को दृश्य मा, अनुपस्थिति को सन्देश कुनै पनि पेशेवर को लागी संचार को एक आवश्यक कार्य हो।
कस्ता त्रुटिहरु बाट बच्न सकिन्छ?
अनुपस्थिति सन्देश को महत्व दिईयो, यो खाता मा धेरै मापदण्डहरु लाई क्रम मा आघात वा तपाइँको वार्तालाप को अनादर गर्न को लागी आवश्यक हुनेछ। अपमानजनक भन्दा धेरै सम्मानजनक आवाज उठाउनु राम्रो छ। त्यसैले तपाइँ OUPS, pff, आदि जस्तै अभिव्यक्ति को उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाइँ खाता मा सबै सरोकारवालाहरु को प्रोफाइल लाई लिन को लागी आवश्यक छ। यस प्रकार, लेख्न बाट बच्न को लागी यदि तपाइँ मात्र सहकर्मीहरु संग कुरा गरीरहनु भएको छ जब तपाइँको वरिष्ठ वा ग्राहकहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, वा यहाँ सम्म कि सार्वजनिक अधिकारीहरु तपाइँलाई सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ।
रिड लेख्ने डरलाई के हुन्छ?
यो असुविधा बाट बच्न को लागी, यो आउटलुक संग आन्तरिक कम्पनी मेलहरु को लागी एक अनुपस्थिति सन्देश र बाह्य मेलहरु को लागी अर्को सन्देश को लागी सम्भव छ। कुनै पनी अवस्थामा, तपाइँ एक राम्रो संगठित अनुपस्थिति सन्देश उत्पादन गर्न को लागी खाता मा सबै प्रोफाईलहरु लाई लिन को लागी हुनेछ।
यसको अतिरिक्त, जानकारी उपयोगी र सटीक हुनुपर्छ। अस्पष्ट सन्देशहरु जस्तै "म भोलि देखि अनुपस्थित हुनेछु" बाट बच्न जान्नुहोस् कि जो कोहि यो जानकारी प्राप्त गर्दछ यो "भोलि" को मिति जान्न सक्षम हुनेछैन।
अन्तमा, एक परिचित र आकस्मिक टोन को उपयोग बाट बच्न। वास्तव मा, दृष्टि मा एक छुट्टी को उत्साह तपाइँ एक धेरै परिचित टोन को उपयोग गर्न को लागी हुन सक्छ। अन्त सम्म पेशेवर रहन सम्झनुहोस्। मौखिक रूपमा सहकर्मीहरु संग, यो हुन सक्छ, तर विशेष गरी काम कागजात को सन्दर्भ मा।
अनुपस्थिति सन्देश को प्रकार छनौट गर्न को लागी?
यी सबै समस्याहरु बाट बच्न को लागी, एक परम्परागत शैली छान्नुहोस्। यो तपाइँको पहिलो र अन्तिम नाम, जब तपाइँ सन्देश प्राप्त प्रक्रिया र व्यक्ति (हरू) को आपात स्थिति मा सम्पर्क गर्न को लागी प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ मा जानकारी शामिल छ।
तपाईंको मेलबक्समा अनुपस्थिति सन्देशमा ध्यान दिनुहोस् इमेल अक्टुबर th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोएक पेशेवर वातावरण मा एक ईमेल लेख्नुहोस्
निम्नतपाइँको सीपीएफ लाई परिचालन गरेर र राज्य को सहयोग संग डिजिटल पेशाहरुमा प्रशिक्षण, यो सम्भव छ!
अनुहारको सामना गर्दा ईमेल भन्दा राम्रो छ
व्यावसायिक सन्दर्भमा प्रयोगको कोडहरू जान्नुहोस्